Hindiya oo laashey Xeerarkii gaarka ahaa ee Kashmiir. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Hindiya oo laashey Xeerarkii gaarka ahaa ee Kashmiir.
On Aug 6, 2019 304 0
Dowladda Hindiya ee uu talada u hayo xisbiga islaam naceybka ku caan baxay ee Bahartiya ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba meesha laga saaray nidaamkii gaarka ahaa ee dowladdu kula dhaqmi jirtay gobolka Kashmiir.
Wasiirka arimaha gudaha ee dowladda Hindiya Amiit Shaah ayaa sheegay in xukuumaddu ay gebi ahaanba meesha ka saartay qodobka 370-aad ee dastuurka Hindiya, kaas oo dhigaya in gobolka Kashmiir ee ay muslimiintu degaan uu lahaado nidaam gaar ah oo ka duwan Hindiya inteeda kale.
Wuxuu sheegay in guud ahaan qodobada dastuurka wadanka Hindiya lagu soo rogi doono Kashmiir iyo Jaamo, taas oo ka dhigan culeesyo horleh oo lagu soo rogo muslimiinta, iyadoo loo diidayo iney ku dhaqmaan diintooda.
Madaxweynaha wadanka Hindiya ayaa goor dambe isaguna sheegay inuu meel mariyay oo uu ogolaaday isbedelka la gelinayo gobolka Kashmiir oo kamid ah dhulalka xooga looga heysto muslimiinta.
Xeerkan hadda meesha laga saaray ayaa markii hore u ogolaanayay Muslimiinta Kashmiir iney dhaqan geliyaan waxyar oo kamid ah sharaa’icda Islaamka, iyadoo loo tixgelinayo iney yihiin dad muslimiin ah oo leh dhaqanno gooni ah.
Balse hadda waxay dadka Aqoonyahannada sheegayaan in la doonayo in muslimiinta Kashmiir lagu soo rogo wax weliba oo ay ku dhaqmaan kooxaha Lo’da iyo dabka caabuda ee ku nool Hindiya.
Dowladda Pakistaan ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxay ku sheegtay iney ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda Hindiya, islamarkaana ay dacwo ka geyn doonto Qaramada Midoobay.
Ra’iisul wasaaraha Pakistaan Cimraan Khaan ayaa sheegay in tallaabada ay qaaday dowladda Hindiya ka hor imaaneyso xeerarka waxa uu ugu yeeray golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Kashmiir ayaa dhul ballaaran oo ku jira gacanta dowladda Hindiya, waxaana gobolkan dega dadka muslimiinta ah, iyadoo sanooyinkii u dambeeyey ay wadaan halgan Jihaadi ah oo ay ku doonayaan iney isaga xureeyaan Hinduuska.